काठमाडौंमा एकै घरका ५ जनाले किन गरे सामूहिक आत्मह’त्याको प्रयास ? यसो भन्छ प्रहरी — Sanchar Kendra
काठमाडौंमा एकै घरका ५ जनाले किन गरे सामूहिक आत्मह’त्याको प्रयास ? यसो भन्छ प्रहरी
काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका-६ स्थित रामकोट डाँडापौवाको एकै घरका पाँच जनाले विष सेवन गरी सामूहिक आत्म ह’त्याको प्रयास गरेको देखिएको छ।
घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी अधिकृतका अनुसार सोमबार राति करिब साढे ९ बजे घटनाबारे जानकारी आएको थियो। घटनास्थलमा पुग्दा एकै परिवारका पाँच जना सख्त बिरामी अवस्थामा फेला परेका थिए। उनीहरूले विष सेवन गरेको देखिएको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसीका अनुसार प्रहरी पुग्दा घरको चेनगेटमा ताला लागेको थियो। त्यो दुई तले घर उद्धव गिरीको हो। दोस्रो तलामा पाँच जनाको परिवार डल्लुबाट भाडामा बस्न गत कात्तिक महिनामा आएका थिए।
मृत्यु हुनेमा २८ वर्षीय सुवर्णमान प्रधान छन्। उनी हाल उपचाररत् ६३ वर्षीया इन्द्रमाया प्रधानका भतिजा हुन्। अन्य गम्भीर अवस्थामा उपचाररत् ३८ वर्षीय भीममान प्रधान, उनकी श्रीमती ३३ वर्षीया मन्दिरा प्रधान र उनीहरूकी ११ वर्षीया छोरी सुब्रिना प्रधान छन्।
‘उनीहरू सबैले विष सेवन गरेको देखिएको छ, उनीहरू गिरीको घरको दोस्रो तलाको एउटै फ्ल्याटमा बस्थे,’ केसीले भने। विष सेवन गर्नुको कारण खुलिनसकेको केसीले बताए। परिवारमा के समस्या थियो भन्ने खुलिनसकेको केसीले बताए।
‘फ्लाटमा सबै जना लडिरहेका थिए, मुखमा फिँज काडिरहेका थिए, फ्ल्याटमा सामानहरू यत्रतत्र असरल्ल थिए,’ केसीले भने, ‘हामीले उठाएर सबैलाई मनमोहन मेमोरियल अस्पताल पुर्यायौं, त्यहाँ पुर्याउदा सुवर्णमानको मृत्यु भयो, अरूको उपचार भइरहेको छ।’
घटनास्थलमा विषका प्याकेटहरू फेला परेको केसीले बताए। तर, ती प्याकेटहरू के-कस्तो विषका हुन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
‘सामूहिक तरिकाले आत्म ह’त्या गर्नका लागि विष सेवन गरेको देखिएको छ,’ केसीले भने, ‘विषका पोकाबारे अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले यही हो भनेर भन्ने अवस्था छैन।’
प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाउने तयारी प्रहरीको छ।